Mustaqbalka Bulshadu WAA Mustaqbalka Suuqgeynta | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 22, 2012 Wednesday, September 25, 2013 Marty Thompson
Waxaan dhowaan fursad u helay inaan ka soo qayb galo Xidhiidhada ExactTarget, iyo dhowr doodood oo guddi ah, waxaan si gaar ah ugu riyaaqay midka xaq u leh Bulsho 2020: Maxaa Na Noqon doona? Waxaa daadihinayay Jeff Rohrs oo aan la koobi karayn, cilmi baarista suuq geynta VP & waxbarashada ExactTarget, waxaa ka mid ahaa Margaret Francis, VP of Social at ExactTarget, David Berkowitz, VP ee Warbaahinta soo baxda ee 360i, Stephen Tarleton, Agaasimaha Global Channel & Suuq geynta Bazaarvoice, iyo Sam Decker, agaasimaha guud iyo aasaasaha Muhiimadda Mass.
Guddidu waxay lahaayeen xoogaa fikrado fikrad kicinaya, iyo saadaal qaar, ama koorso. Suuqge ahaan, waxaan hayaa fekerkeyga gaarka ah ee ku saabsan sida mustaqbalku u ekaan karo, waxaana jira xariiq feer ah oo u dhow dhamaadka tan, laakiin sadarada soo socda ayaa laga yaabaa inay gacan ka geystaan ​​bixinta aragti yar.
Anaga suuqleyda ah waqtiyada qaar waxaan ilaawnaa in awoowayaasheen suuq geyntu ahaayeen ugaarsato. Waxay doonayeen wax kale oo aan ahayn inay ka reebaan tartamayaasha macaamiishooda suuqa. Hadday ku ugaarsan lahaayeen warmo, seefo iyo goomayaal, way lahaan lahaayeen.
Markaan ku hor marno sheekada taariikhiga ah ee suuqgeynta, kulligeen waan fahamsanahay horumarka gaabiska ah ee la sameeyay, taasoo horseedeysa fikradda farriinta saxda ah, qofka saxda ah, waqtiga saxda ah. Ilaa xadkaas, waxaan mararka qaar qiil u heli karnaa shaqadeena annagoo dhahayna runti waxaan macaamilka ugu sameyneynaa wanaag annagoo siinayna adeeg qiimo leh. Ka dib oo dhan, shaqo ayaa inala gudboon.
Laakiin aan wajahno; yoolka 2,000 BC ayaa ahaa ka caawi macaamiisheena inay gaaraan xukunka suuqa. Waana weli waa.
Si dhakhso leh ugu soco da'da wax kasta oo bulsheed. Tikniyoolajiyadaha bulshada ayaa qabtay shirkad Mareykan ah oo ku taal isweydaarsiga. Markiiba ugaadhsigii ayaa xoogaa nugul noqday. Waxaan ka falcelnay xaqiiqadan cusub, si xunna waan u sameynay intabadan. Immisa shirkadood ayaa maanta xitaa si ku filan uga jawaabaya su'aalaha lagu dhajiyay Twitter?
Qalad ha ka gelin. Haddayna bulshada la imaan lahayn, adduunyada ganacsi ma beddeli lahaayeen dhaqankooda. Haddii shirkaduhu ay aad u jeclaan lahaayeen inay noqdaan kuwa macaamiisha diiradda saaraya, miyaanay abuuri lahayn noocyo u gaar ah kanaallada bulshada? Weli waxaan ku noolnahay dagaalkan ama dunidan duulimaadka, iyo shirkado badan ayaa si aad ah isugu dayaya inay xakameyaan xaqiiqadan cusub ee bulsheed, si ay u qaabeeyaan.
Mar inbadan oo ka mid ah bulshada suuq geyntu ay qabsadeen bulshada, waxaa loola dhaqmay sidii sed, wankii geed ku xirnaa, waxaa loo adeegsaday inuu libaaxii aan ka fiirsanin dabin ugu jiido. Laakiin waxaa jira koox kale oo ka tirsan qabiilkayaga, kuwa u arka bulshada inay yihiin qariib, layaab qabiilka cusub ee ku soo wareegay dhulkeena Haa, way ka duwan yihiin, laakiin waxay keenaan hadiyado wadashaqeyn, dhegeysi, bulsho, wadaag ah.
Weli waan ugaarsaneynaa, laakiin waxaan u sameynaa sidii qoys ballaaran. Waxaan qaadaneynaa oo keliya waxa aan ubaahanahay, waxaana wadaagnaa sheekooyinka dabka hareerahiisa ka socda. Waa khiyaano, laakiin isbeddel qoto dheer oo ku saabsan sida annaga suuqleyda ah ugu dhawaano farsamadeenna. Micnaheedu maaha inaan joojinno ololeheena, qiyaasaheena, ama sababteena ah inaan suuq geyno. Micnaheedu waa inaan ugaarsano beel ka weyn, waxaanna ku wargalineynaa go'aamadeenna aragti aad u kala duwan.
Marka waxaan halkaan u joognaa, hadaan nahay suuqleyda ka shaqeynaya xaqiiqadan cusub, hadana wali waxaan u muuqanaa inaan mararka qaar u dhaqanno sidii inaan wali ku jirno adduunkii hore. Dabeecaddee ah suuqgeynta Ciyaaraha Gaajada ah ayaa tahay? Hadda dib ugu laabo su'aasha ay soo bandhigeen guddiga, iyo talooyinkayga ku saabsan sida loola kulmo mustaqbalka aan la garanayn ee bulshada. Jawaabtayda jumladduna waa:
Jooji ku mashquulinta tikniyoolajiyadda!
Internetku asal ahaan waa mid bulsheed, laakiin sida macluumaadka macno ahaan ugu fadhiyaan kanaal kasta, way sii adkaanaysaa oo way sii adkaanaysaa in la helo feejignaan. Ganacsatada mustaqbalka ee bulshada ee sababa khalkhal gelinta tikniyoolajiyadda ayaa si dabiici ah uga jawaabi doona tan, iyo qodobka aan la garanayn ayaa runtii hoos ugu sii dhacaya intee buuq noqon doonaa? Ganacsatada cusub ee qabiilooyinka waxay fahamsan yihiin inay aad ugu adag tahay ururada inay saadaaliyaan mustaqbalka tikniyoolajiyadda bulshada. Iyagu waa inay diiradda saaraan waxa sii wadi doona inay noqdaan kuwo xasaasi ah wixii carqalad ah ee yimaada, kuwaas oo ah, dabeecadaha la ixtiraami doono iyadoon loo eegin isbeddelada tiknoolajiyada.
Tags: 360ibaasaarvoiceisku xirnaanta 2012David Berkowitzsaxsanxidhiidhada saxda ahmustaqbalka suuq geyntamustaqbalka bulshadamustaqbalka warbaahinta bulshadajeffrey rohresmargaret francisisku xirnaantasamameStephen tarleton
Oktoobar 22, 2012 at 6:34 PM
Faahfaahin weyn, waxay muujineysaa in suuqgeynta, mustaqbalka ay gabi ahaanba ku xirnaan doonto warbaahinta bulshada maaddaama kororka warbaahinta bulshada ay si deg deg ah u socoto.